"Mhosva dzegungwa", kutya uye kufungidzira kubva paruoko rwaGemma Herrero. | Zvazvino Zvinyorwa
Diana Millan | | Mabhuku, Zvinotyisa
Gemma Herrero anga ari wekupedzisira kuAmazon Literary Prize yeiyi 2017 nebasa rake rinonakidza «Los mhosva del lago». Tinogona kusimbisa pasina kupokana kuti iyi inoverengeka iyo haisiye chero mudiwa weanotyisa mhando asina hanya.
Uye 2001, Swanton, taundi diki muVermont, rakazungunuswa nemafungu ekuponda. Vana vatatu vanopondwa noutsinye pa mhenderekedzo dzeLake Champlain. Eric, jaya rakapedza hudiki hwake mutaundi iro, anomanikidzwa kudzokera kunzvimbo iyo yakamurwadza zvakanyanya, kutsvaga mhinduro.
Mushure mekupondwa kwevana vatatu, kusanganisira Anne Austen, rudo rwake rukuru, Eric anonyura mukuwedzera kurwadziwa. Yakatarirwa nekuonekwa kweshamwari dzake 'zvipoko uye nehusiku, chokwadi chaEric chinotanga kukanganisa. Panzvimbo yekudonha uye achitambura nehutano hwepfungwa, vabereki vaEric vanosarudza kusiya guta iri kumashure nekuenda kuBurlington.
Makumi gumi nemashanu mushure mekuitika, chitoro chemabhuku uko Eric anoshanda chinogashira odha yenyaya yakasainwa naAnne Austen, "The Lake Murders." Kubva panguva iyo Eric akabata bhuku iro mumawoko ake, anoziva akavhura musuwo usingagone kuvharwa kudzamara chokwadi chese chawanikwa.
Panguva ino, Eric akatsunga kudzokera kutaundi iro uye anotarisana nezvipoko zvekare. Asi Swanton ine zvishoma kushamisika kwaari, nhoroondo inozvidzokorora. Nerubatsiro rwemuoni nasheriff, Eric anoongorora kusvika kumagumo kuti aone zvakavigwa neguta rakatukwa iri.
Na "Mhosva dzegungwa" Herrero anokwanisa kubata muverengi kubva kwekutanga kusvika kune rekupedzisira peji. Zano rinonakidza, rizere kusahadzika uye chakavanzika chakakodzera chero bhuku raStephen King. Vatambi vanoshanda zvakanyanya uye vanoenderana nekuvandudzwa kwenyaya. Kune rimwe divi, kune basa rinoshamisa remumunda nekutsvaga pamusoro penzvimbo inoitika zviitiko.
Mhedzisiro, zvakare yakabudirira kwazvo, uchafanirwa kuzvivhenekera.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve munyori uye zvimwe zvinyorwa, usazeze kushanyira webhusaiti ye Gemma Smith
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Zvinotyisa » "Mhosva dzegungwa", kutya uye kufungidzira kubva paruoko rwaGemma Herrero.